DR Congo - ALinks
Maqaallo ku saabsan DR Congo
Sidee loo Codsadaa Visa-ka DR-Congo?
September 23, 2020 Antika Kumari DR Congo, fiisada
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo waa waddanka ugu ballaaran Bartamaha Afrika. DR-Congo waxaa sidoo kale loo yaqaan Congo-Kinshasa. Waa dalka ugu weyn Bartamaha Afrika. Si kastaba ha noqotee, waxay ku taal Bartamaha Afrika, waana inay lahaato waxyaabo safari ah. Laakiin,
April 25, 2020 Shubham Sharma DR Congo, shaqo
Gudaha, qoraalkan waxaad ka heli doontaa habab kala duwan oo aad shaqo uga heli karto DR Congo (DRC). Waxaa jira shaqooyin badan oo loogu talagay dadka safarka ku jooga DR Congo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo waa waddan ku yaal
Bangiyada ugu Fiican Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo !!
April 17, 2020 Shubham Sharma DR Congo, lacag
Bangiyada ku yaal Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo (DRC) way wanaagsan yihiin. DRC waxay leedahay Bangiga Dhexe ee Kongo (Banque Centrale du Congo, BCC) oo ah baanka dhexe ee dalka. BCC ayaa maamusha wareejinta lacagta waxayna haysaa
Nidaamka waxbarasho: Dimuqraadiga Kongo
March 5, 2020 Karuna Chandna DR Congo, dugsiga
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waa waddan 342,000-kiilomitir oo laba jibbaaran oo ku yaal Equatorial Afrika. Dadkeedu waa in ka badan 7 milyan. Qiyaastii 12.6% miisaaniyadda Congo waxaa lagu kharash gareeyaa nidaamka waxbarashada. 40% waxbarashada aasaasiga ah, 31% heerka dugsiga sare iyo 27% heerka jaamacadeed. Iyo
Daryeel caafimaad iyo cisbitaalo wanaagsan oo kuyaala Jamhuuriyadda Kongo.
February 14, 2020 Shubham Sharma DR Congo, caafimaadka
Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Jamhuuriyadda Koongo / Isbitaalada dadweynaha maxalliga ah iyo tas-hiilaadka caafimaadku waa kuwo aad u ba'an, taas oo macnaheedu yahay inaysan awoodin inay bixiyaan ikhtiyaarro daaweyn oo wax ku ool ah marka loo eego kuwa heerarka reer galbeedka. Daryeel caafimaad iyo cisbitaalo wanaagsan oo gudaha ah
Waqtiga ugu Fiican ee Aad Soo booqan Karto Sahaminta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo
February 14, 2020 Antika Kumari DR Congo, safarka
Waqtiga ugufiican ee lagu booqdo laguna sahamin karo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo waa inta lagu jiro xilliga qallalan ee May ilaa Sebtember, iyo Bisha Luulyo oo ah bisha ugu dhibicsan, oo ku xigta bisha Juun. Heerkulka waxyar ayuu hoos ugu dhacayaa bilahaas. Waxa kale oo jira mid gaagaaban
Meelaha ugu Fiican ee lagu Joogi Karo DRC
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo (DRC) kaliya maahan dalka labaad ee ugu balaadhan qaarada Afrika laakiin waxay sidoo kale tahay midda ugu qanisan aduunka kuna yaal adduunkan waxayna leedahay dahab aad u badan, tantalum, tungsten, iyo tin. Hadaad